Kongresin’antoko politika; fampielezankevitra handanina vola. | mandimby maharo
Kongresin’antoko politika; fampielezankevitra handanina vola.	Posted on 7 April 2013 by Mandimby Maharo	Edgard Razafindravahy Marie Noé, 48 taona ary Filohan’ny Delegasiona manokan’ny tananan’Antananarivo no atolotry ny antoko Tanora Malagasy Vonona ho kandida filoham-pirenena amin’ny volana jolay ho avy izao. Izy no voatendrin’ireo mpikambana taorian’ny Vovonam-pirenen’ity antoko naorin’ny Fat ity ny 05 sy 06 aprily lasa teo teny amin’ny Futura Andranomena. Raraka teny an-dalana noho izany izy roa lahy izay nifaninanana taminy, dia ny Minisitry ny volan’ny tetezamita Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy ny masoivoho ny Madagasikara any Genève Camille Vital. Niantefa tany amin’ity mpandraharaha sady tompon’orinasan’tserasera, ary manana fifandraisana manokana amin’ireo mpanefoefo sy mpanao politika atsy amin’ny nosy Maurice ity noho izany ny fanantenan’ny TGV. Tsapa ihany koa nefa tamin’ny fihetsika nataon’ireo nanana fanantenana fa ho voatendry fa ho kandika fa misy ihany tsy fifankazahona tao. Ary hita koa fa na ireo mpikambana aza dia tsy dia mahazohazo loatra ity kandida ity. Na izany aza dia kandida mahafeno ny fepetra rehetra voafaritry ny didy hitsivolana laharana faha 2012-005 tamin’ny 22 martsa 2012 momba ny fifidianana izy (Code éléctoral).
Araka ny fanambarana natao nandritra io vovonanam-pirenena io dia ity kandida ity no tonga dia lasa Sekretera Jeneralin’izany antoko izany. Antoko izay nanao fanehon-kery tamin’ny nahatongavan’ny soloten’ny sampany any amin’ny faritra maro manerana ny nosy. Voalaza matetika teo amin’ny fanentanana manelanelana ny fampisehon’ireo mpanakanto sy ny dihy maro samihafa nanafanana ity lanonana ity moa ny hoe efa mahenika ny faritany 6 sy ny faritra rehetra suy ny kaominina ka hatrany amin’ny fokotany mihintsy ity antoko ity. Ity fanendrena ny sekretera jenaraly ity izany dia manamafy ny maha antoko politika azy manaraka ny lalàna laharana 2011-012 tamin’ny 09 septambra 2011 mifehy ny antoko politika. Nahafeno ny fepetra tamin’ny fanavaozana ny fisoratana anarana tao amin’ny ministeran’ny atitany koa noho izany ity antoko ity matoa afaka nanao iny fihaonana iny. Fanavaozana ny ny fisoranana anarana izay nentina indrindra anamafisana ny voalazan’ny lalàna voalaza etsy ambony.
Raha nahavita ny vovonam-pireneny ny antoko TGV dia mbola maro ireo antoko hikarakara izany. Didin’ity lalàna mifehy ny antoko politika ity tokoa manko ao amin’ny andininy faha 18 fa ny antoko rehetra dia tsy maintsy manao izany fihaonana izany isaky ny dimy taona farafahakeliny. Ny vovonana ireny ihany no afaka mamaritra ny lalam-kevitra ijoron’ny antoko politika (orientation générale) sy amaritany ny drafitr-asam-piarahamonina ho tanterahiny (projet de société) ary ny foto-pisainana iainan’ny antoko (idéologie). Voafaritra koa fa raha tsy manao izany fihaonana izany ny antoko dia foana avy hatrany. Tsy maintsy hiazakazaka hanao izany noho izany ireo antoko mikasa hanolotra kandida amin’ny fifidianana rehetra. Ny fisin’ny drafitrasa ihany koa manko no antoka iray afahan’ny kandida iray hirotsaka.
Ny fanontanina dia ny hoe hahavita toy ireny fampisehon-kery nataon’ny TGV ireny ve ny antoko rehetra. Tsy azo lavina fa vola be no lany tamin’ireny. Raha ho an’ny antoko TGV dia tsy olana aminy no nanangna ny vola nikarakarana ireny noho ny fananany mpikambana, mpandraharaha sy olo-panjakana (sivily sy miaramila) afaka manao fanomezana. Tolotra izay voafehin’ny lalàna koa nefa ny fanaovana azy. Fa raha ho an’ny antoko hafa dia ho sarotra ihany izany raha tsy miezaka manangon’olona maro ka ny latsakembok’ireo no entina hanaovana ny fihaonam-be.Eo amin’izay famatsim-bola izay dia antenaina fa mba hanaraka ny fepetra ihany koa ireo kandida sy antoko ireo amin’ny mangarahara eo amin’ny fihavin’ny vola anaovany ny fampielezan-keviny. Eo koa ny fanaovana fanambarampanana ho an’ireo izay misahana asampanjakana nefa hilatsaka ho fidina. Mihatra koa io ho an’ny mpandraharaha hirotsaka ho mpanao politoka. Fangaraharana izay takin’ny andininy faha 33 ka hatramin’ny 38 ny lalàna mifehy ny antoko politika ihany.
Tags: éléction, Edgard, MADAGASCAR, politique, tgvCategories: Uncategorized
One thought on “Kongresin’antoko politika; fampielezankevitra handanina vola.”	Mandimby Maharo says:	20 October 2013 at 909 51	A reblogué ceci sur mandimby maharo and commented: Haveriko atoraka ity lahatsoratra an’blaogy ity. Raha ny resaka ao anatiny dia efa nahitana fiovana ihany, saingy ny foto-kevitra nanoratana azy dia mbola mitombika hatrany ” Ny famatsim-bola’ny antoko politika sy ny fampielezan-kevitra”. Ny valandresaka nataon’ny Samifin tamin’ny Zoma 18 oktobra 2013 teo dia mamelona indray ireo resaka ireo.